Zanzibar Yepasi Pose Mutambo weFirimu kuenda kuBoost Island Tourism
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Zanzibar Yepasi Pose Mutambo weFirimu kuenda kuBoost Island Tourism
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mutungamiri weZanzibar paInternational Film Festival
Mutungamiri weZanzibar Hussein Ali Mwinyi akatsigira varongi vemutambo wepagore weZanzibar International Film Festival (ZIFF) uye vakati chiitiko ichi chichafumura nekusimudzira kushanya kwenhaka pachitsuwa ichi.
ZIFF ndeimwe yemitambo yemafirimu yeAfrica, ichichiitisa sechiitiko chakakosha.
Mutungamiri Mwinyi vakataura kuZimba State House kuti mutambo uyu unobatsira kusimudzira nekushambadzira kushanya kweZanzibar.
Mwinyi akasimbisa kuti hurumende ichaenderera mberi ichishanda pamwe chete neZIFF kuona kuti iri kuramba ichiwana zvakawanda.
Iyo Zanzibar International Firimu Mutambo yakatangwa makore makumi maviri nemana apfuura nekubudirira kukuru muZanzibar. Chiitiko chegore rino chiri kuitika kubva muna Chikunguru 24 kusvika 21 paStone Town, nzvimbo inotungamira yekushanya muZanzibar nenzvimbo yenhaka yevashanyi.
Varongi veZIFF yegore rino vakwezva anopfuura makumi maviri nemaviri emafirimu kubva munyika makumi maviri neshanu. Tanzania ine mafirimu gumi nematatu nepo Kenya iine 240, Uganda 25, uye South Africa 13.
Pane mafirimu makumi matanhatu nematanhatu akasarudzwa kuongororwa gore rino, aine gumi maficha, mashanu maficha, uye makumi mapfumbamwe mafirimu uye mifananidzo mumakwikwi, Director weZIFF Professor Martin Muhando akadaro.
“Gore rino, takagamuchira anopfuura 240 emafirimu. Takagamuchira mafirimu kubva kunyika makumi maviri neshanu kusanganisira kekutanga firimu kubva kuEstonia, ”akawedzera.
Mutambo inotarisira kusimudzira ruzivo uye kusimudzira nyika dzese cinema sehunyanzvi, varaidzo, uye seindasitiri, kusimudzira nhaurirano, kodzero dzevanhu, uye rusununguko.
Kuburikidza nezvirongwa zvayo, mutambo uyu unosvika pavanhu vakawanda, zvinova zvinoita kuti ZIFF ive yakasiyana.
Muzvinafundo Muhando vakati mutambo uyu unopa rubatsiro rwakakura mukunzwisiswa kwema cinema kuburikidza neforamu dzeveruzhinji, kuongororwa kwenharaunda, uye mimhanzi nemapuratifomu ehunyanzvi.